Jimmy Iovine anopa hurukuro nyowani paApple Music uye chikamu | Ndinobva mac
Munguva yezuro, Jimmy Iovine, director director webasa reApple Music, akasangana na Business Music Worldwide kuitisa hurukuro nyowani, uko kwenyaya dzese dzazvino nyaya dzakafukidzwa, senge yenguva yemuyedzo nguva ye Spotify, zvakasarudzika zvinopihwa nevanyori uye vagadziri, uye mamwe avant-garde madingindira muimhanzi indasitiri.
Iovine haana kuruma rurimi rwake uye apindura zvese zvakabvunzwa, panguva iyo indasitiri yemimhanzi iri mukushandurwa kwakazara kwedhijitari, ine nyaya zhinji dzekupokana pakati pevane chekuita.
ionvine akatsanangura kuti musika unofanirwa kuve unodzvinyirira, pamwe nekusanganisira kuvandudza kwakanyanya mumasevhisi ekubhadhara. Sezviri pachena, maartist mazhinji haachaoni indasitiri yemimhanzi sosi yekuwana mari, uye saka tarisa zvakanyanya pakusimudzira mafambiro, makonzati uye kushambadzira:
“Chokwadi ndechekuti, 'masevhisi emahara' muindasitiri yemimhanzi iriko yakanaka kwazvo, kutaura zvehunyanzvi, uye inowanikwa kwese kwese, zvekuti zvinotadzisa kukura kwekushambadzira kwakabhadharwa. Pane zvinhu zviviri zvinofanirwa kuitika: izwi remahara rinofanira kubva raenda, zvoomera kutaura kana kubvumidzwa, uye masevhisi akabhadharwa anofanirwa kugadzirisa zvakanyanya.«
«Vaimbi vemazuva ano vanotenda kuti kune mari shoma kwazvo mubhizimusi remimhanzi nhasi. "Saka vazhinji vavo vari kutarisira kuti chinangwa chavo chive kusimudzira makonsati nekutengesa."
"Zvakakodzera isa zvese musimba redu kugadzirisa ruzivo rwevashandisi yevatengi vari kutsigira iyi indasitiri. Zvakare kuitira kuti vaimbi vanzwe kukurudzirwa kuti vaite basa ravo. "
Paakabvunzwa na mashandiro anoita Apple kugadzira Apple Music basa rekusiyanisa muindastiri, Iovine akatsanangura kuti vhidhiyo iri kuve yepakati chikamu cheruzivo rwemimhanzi, ichiunza kukosha kwakawedzerwa kune chiitiko chemimhanzi
Jimmy akavimbisa izvozvo Kana Apple ikapa chero fomu yemahara yeApple Music, panogona kunge paine vangangoita mazana mana evashandisi mahara. Asi izvo hazvingave zvinobatsira kune indasitiri.
«Isu tinotenda kuti maartist anofanirwa kubhadharwa. Ndosaka ndiri kuApple. Uye ndizvo zvinofungirwa naTim (Cook) naEddy (Cue). Ndozvakafungwa naSteve (Mabasa). "Ndozvinofungwa naApple."
Iovine akataura zvakare nezvenyaya yezvakasiyana, chimwe chinhu chakafambiswa naApple munguva yakapfuura, uye icho kwakakonzera kunyongana pamazita ekunyora. Iovine anoziva kuti vhidhiyo zvemukati inzira iri nani kwazvo yekukura mukureba kwenguva:
“Takamboshandisa nzira iyi kare. Muchokwadi, isu tichiri kuishandisa neyeartist pano neapo. Iyo mimhanzi ecosystem inoita kunge isingaifarire. Iye zvino tazara nemavhidhiyo zvemukati. "Tiri kuisa mari zhinji mairi."
Pakupedzisira, Jimmy akataura nezve musangano wakundikana waakaita naye Intel, nguva pfupi asati asvika paApple:
Ndakadanana naSteve Jobs naEddy Cue mushure meizvozvo. Pane imwe nguva, ndakaenda kunosangana nemumwe munhu kuIntel, ndisati ndaziva iyo Apple ecosystem kubva mukati. Uye ndakavatsanangurira mamiriro akaoma einjiniya uye muimbi wechidiki seni panguva iyoyo. (Pakukwirira kwepiracy uye kuderera kweaudio-mimhanzi bhizinesi nekuda kwayo).
Ndakavaudza kuti: Kana tikakwanisa kushanda pamwe chete, tinogona kutora mukana wepuratifomu yavo yemimhanzi. Uye izvi zvinogona kubatsira iyo indasitiri kuwana kukosha kwayo, panzvimbo yezvakawanda zvemahara zvemukati.
Mhinduro yaive: Kunyangwe iri nyaya inonakidza, zvinosuruvarisa kwete ese maindasitiri akavakirwa kuti agare nekusingaperi. Ndakamhanya ndichibvapo. Zvakava pachena kuti taive pamapuraneti akasiyana.
"Ndipo pandakasangana naSteve naJobs, ndikaona kuti vaifunga seni."
Unogona kuverenga iyo yakazara kubvunzurudzwa pano. Zvakakosha.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Jimmy Iovine anopa hurukuro nyowani nezve Apple Music uye chikamu